Munamato kuna Musande Anthony Kuti Awane Rudo Rwechokwadi [+ Rwakasimba]?
Namata kuna San Antonio kuti uwane rudo, kutsvaga kwechokwadi rudo chinhu chinochengeta vanhu vazhinji vakabatikana uye vane hanya. Ichi chikonzero nei nguva zhinji ivo vari mukuda kugadzira a munamato kuna San Antonio kuti uwane rudo, kuvabatsira kuzviwana.
Kuzivikanwa kwemunhu kunosanganisira kukwanisa kutanga yavo mhuri uye nekuda kweizvi, ruzhinji, ivo vanoda munhu wokuperekedza navo mukuita kwese.
Rudo rwechokwadi rwave rwekutengesa, rwakanyanya zvekuti nguva zhinji takamirira iwo chaiwo iwo muenzaniso wezvavanotengesa mumafirimu, mabhuku uye nzanga yakazara.
Kutanga isu tinofanira kusiira zano iro parutivi, rudo runogona kutishamisa munzira yatisingafungire, saka tinofanira kuve takagadzirira uye nemoyo wakashama kuzvigamuchira kana zvasarudza kusvika.
Namata Kuwana rudo rwechokwadi kunotibatsira kumirira kwenguva yakareba sezvazvinodiwa uye kuziva nzira yekuzvizivisa.
1 Namata kuna Saint Anthony kuti uwane rudo Rune simba here?
1.1 Munamato wekuwana rudo rwechokwadi
1.2 Namata kuna Saint Anthony wePadua kuti uwane rudo
1.3 Namata kuna San Antonio kuti uwane rudo rwehupenyu hwako
2 Ndinogona kutaura minamato mitatu kuSan Antonio?
Namata kuna Saint Anthony kuti uwane rudo Rune simba here?
Iine simba uye ine simba, kunyanya kana iwe uchizviita nekutenda uye kubva pamoyo. Izwi raIshe rinotidzidzisa, mune imwe yake isingaverengeki nhoroondo yeiyo testamendi itsva, kuti rudo runogona kuita zvese, kutarisira zvese, kutsungirira uye harimboregi kuva.
Nenzira iyi tinogona kuziva nechokwadi kuti rudo kana kuti chimwe chinhu chiri kunzwikwa. Vazhinji vanoti vanoda uye nguva inorega kuzviita, izvi, maererano neshoko raMwari, hazvisi zvetsika.
Mwoyo unonyengera, kupfuura zvinhu zvese. Kunzwa kuchinja nepo rudo chisarudzo.
Kunamata Mwari musiki uye nekumukumbira kuti atitungamirire kuti tione kuti ndiani anofanirwa nerudo rwedu uye ndiani asingadi, pamwe nekuziva kuti ndiani asarudza kutida zvechokwadi kwakakosha sezvo tichidzivirira mamiriro anogona kurwadza.
Rangarira kuti hapana munamato unoitwa nekutenda hauna kupindurwaa.
Zvinogona kutora chinguva kana mhinduro ichibva kwatinofunga zvishoma, asi isu tinofanirwa kuve neruzivo rwekuziva kuti Mwari vari kuita zvese mukuda kwedu uye anoziva izvo zvatinoda chaizvo.
Munamato wekuwana rudo rwechokwadi
Mwari wangu, Imi, sekusika, mupe hupenyu kuzvisikwa zvese. Iwe unoona zvese uye unoziva zvese, usamira kutungamira kutarisa kwako kune hupenyu hwangu uone maitiro andinofanira kugadzirisa kuti ndive munhu iyeye anogona kuva nerudo rwechokwadi.
Kana chimiro changu chisiri chakanyanya kukodzera, kana nzira yangu yekuve nekurarama isiri concordes nerudo, ndiudze. Ndokumbira undiudzewo mumoyo mangu zvese zvandinofanira kuziva nezveshoko rako. Uswedere munzeve yangu uye utaure zvandinofanira kuita. Usandisiye, zuva nezuva, ndakamirira rudo chairwo, ndisingazive kuti ndini ndinofanira kuchinja.
Mwari wekudenga, nekumusoro uye nekunakisa, ndinovimba mamuri. Ndoziva kuti izwi rako mumoyo mangu rakafanana nemvura yakachena inoenda mukati merukova uye inoshambidza zvese munzira yayo. Ndakamirira shoko renyu nezano renyu rose. Ini ndinotarisira kudzamara kwako. Ndinoda kukugashirai mukati mangu. Ndinoziva kuti vachave vakanaka, vakangwara uye vari vechokwadi, yakakodzera hupenyu hwangu hwerudo.
Nekuti uri Kururamisira, uchenjeri nechokwadi. Mwari wedenga, ndinokuvimbisa iwe kuti ndichaisa mukushandisa matipi ako ehunyanzvi uye kuti ini ndichagara ndichitevera nzira yaunondimaka. Nditungamire munzira iyi kuti ndizive nzira chaiyo yekutevera, nguva dzose zvinoenderana nemitemo yako yerudo. Ini ndinonamata kuti wandichazoroora naye agare achindikudza uye achindida pasina mamiriro uye achindisarudza kupfuura vamwe vese.
Munamato uyu unofanirwa kuitwa tichiisa padivi zvatinofarira, isu tinofanirwa kufunga nezve izvo zvakakosha kupfuura manzwiro, izvo zvichagara kuburikidza nemakore.
Rudo runogona kuwanikwa chero kupi asi rudo rwechokwadi runovakwa zuva nezuva. Iri iboka reboka umo ratinovimba nerubatsiro rweMusiki Mwari wezvinhu zvese.
Kana zvichikwanisika kuwana rudo rwechokwadi uye kana isu tichivimba nesimba remunamato mikana yacho yakanyanya kukura. Namata uchishandisa mazwi edu uye umirire mhinduro.
Namata kuna Saint Anthony wePadua kuti uwane rudo
Wakakomborerwa Mushe Anthony, mutsa worudo rwevatsvene vese, kuda kwako Mwari uye kuda kwako zvisikwa zvakakuita wakakodzera kuve nemasimba anoshamisa.
Nemashoko ako wakabatsira avo vane matambudziko kana kusagadzikana uye zvishamiso zvakaitika kuburikidza nekureverera kwako. Ndinokukumbirisa kuti unditsvakire ... (taura chikumbiro chako).
Nyoro uye mudikani mushe, nemoyo wako unogara uzere netsitsi dzevanhu, dhara chikumbiro changu kuna Jesu Mwana anotapira, aifarira kuve mumaoko ako, uye gashira nekusingaperi kutenda kwemoyo wangu. (Namatira vatatu vevabereki vedu uye vatatu Rumbidzai Marys.)
Saint Anthony wePadua ndiye musande watinofanira kunyengetera kwaari kuti tiwane rudo rwechokwadi. Anogona kukubatsira kuti uwane rudo, mumwe wako, iyo imwe hafu, hupenyu hwako.
Ndomumwe munhu akagadzirirwa iwe zvakanyanya, usakahadzika kuti ndizvo.
Minamato ine simba uye inotibatsira kutungamira masimba zvakanaka kuti tirege kuwira mukuora mwoyo kana kukanganisa kwekutenda kuwana rudo uko pasina.
Namata kuna San Antonio kuti uwane rudo rwehupenyu hwako
Saint Anthony, anokudzwa uye anozivikanwa mashura ako, ndipeiwo Ngoni dzaMwari kuti ndizadzise chishuwo changu che (kuwana mumwe wangu).
Sezvo iwe uine tsitsi kwazvo kune vatadzi seni, usatarisa kutadza kwangu, funga nezveKubwinya kwaMwari kuti undiregerere kukanganisa kwangu, ndipe chikumbiro chandinoita nesimba kwauri. Kubwinya kweAnthony Anthony weMimangaliso, nyaradzo yevanotambudzika, ndinokumbira rubatsiro pamabvi ako uye uve Gwara rangu Ndauya kuzobatsirai nechikumbiro uye izvi zvakasunungura moyo wangu unotambudzika uye nekutenda.
Gamuchira zvipiriso zvangu zvekuzvipira uye nerudo kwauri. Ndinovandudza vimbiso yangu yekurarama nekukuda iwe, Mutsvene Anthony, Mwari uye muvakidzani wangu.
Ndiropafadzei nechikumbiro changu, ndipeiwo nyasha kuti ndipinde muHumambo hweKudenga rimwe zuva, kuti ndigone kuimba nziyo dzaIshe nekusingaperi.
Sn Antonio anokuteerera iwe uye akubatsire mukutora maitiro kuitira kuti iwe uwane rudo hwehupenyu hwako.
Kana uchinge wawana zvakafanana, unogona kuramba uchimukumbira kuti aenderere mberi achitungamira nhanho dzake nezvaanosarudza nguva dzese.
Munamato une simba, tenda uye uvimbe kuti achaita zvimwe.
Ndinogona kutaura minamato mitatu kuSan Antonio?
Iwe unoda here kunamatira kupfuura munamato wekuwana rudo rwechokwadi?
Anogona uye anofanira kunyengetera minamato yose pasina mipimo. Vanogona kunamatwa vese pamwe pasina dambudziko.
Rangarira kuti chinonyanya kukosha ndechokuva nekutenda kwakawanda munaMwari uye muSan Antonio.
Nenzira iyi iwe unowana rubatsiro rwakakwana rwekuti uwane rudo.